ဘယ်လိုရာထူးတိုးဖို့ | USAHello ထံမှယောဘနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
A ကောင်းဆုံးအလုပ်ကျင့်ဝတ်နည်းလမ်းတစ်ဦးအပြုသဘောနှင့်အလုပ်ဆီသို့ Hard-အလုပ်လုပ်သဘောထားကို. ကောင်းသောအမှုကျင့်ဝတ်နှင့်အတူလူ:
သငျသညျလုပ်နေလိုတစ်ခုခုတွေ့မြင်လျှင်, ထိုသို့ပြု. သငျသညျတစ်စုံတစ်ယောက်သိပ်အလုပ်ရှိကြောင်းတွေ့မြင်လျှင်, အကူအညီကမ်းလှမ်းမှုကို. (ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အလုပ်ပထမဦးဆုံးအပြုသေချာပါစေ။) အဆိုပါတို့တွင်ကျင့်ဝတ် A ကောင်းဆုံးအလုပ် ထိပ်တန်းအမေရိကန်တန်ဖိုးများ. ကောင်းသောအမှုကျင့်ဝတ်ရှိသည်သောသူန်ထမ်းများကဲ့သို့ကုမ္ပဏီများ.
သင့်ရဲ့သဘောထားကိုကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်သင့်ရဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. USA တွင်, သဘောထားကအကြောင်းစကားပုံရှိပါတယ်. အဆိုပါစကားပုံဖြစ်ပါသည်, သငျသညျတစ်ဝက်တက်၌ရေကိုအတူဖန်ကိုကြည့်ပါလျှင်, သင်ဖန်ဆိုနိုင် “အပြည့်အဝထက်ဝက်,” သို့မဟုတ်သင်ဖန်ဆိုနိုင် “ဝက်သွန်။” ဖန်ခွက်တစ်ဝက်အပြည့်အဝပြောရန်ပိုအပြုသဘောရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. အကောင်းတစ်ဦးသဘောထားကနည်းလမ်းထားရှိခြင်း:
သငျသညျမင်ျဂလာအခါသင်ပြုံး - အမေရိကန်များမကြာခဏပြုံးနှင့်ပြုံးကြည့်ရှုဖော်ရွေ၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်
သငျသညျပဏာမခြေလှမ်းကိုပြသ - ပဏာမဖေါ်ပြခြင်း ဟုမေးခံရခြင်းမရှိဘဲတစ်စုံတစ်ခုအပြုသဘောဆောင်လုပ်နေနည်းလမ်းများ
တစ်ဦးကအပြုသဘောသင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီဆိုးဆိုးရွားရွားကိုသင်ပြုမူဆက်ဆံသို့မဟုတ်ကလူကိုသင်ရိုင်းစိုင်းဖြစ်ခွင့်ပြုပါရန်ခွင့်ပြုသင့်တယ်မဆိုလိုပါ. အပြုသဘောဆောင်သဘောထားများရှိသည်သောသူန်ထမ်းများကဲ့သို့အလုပ်ရှင်များ. တစ်ဦးအပြုသဘောနှင့်အတူတစ်ဦးကလူတစ်ဦးရာထူးတိုးဖို့ကပိုဖွယ်ရှိသည်.
3. တစ်ဦးဆရာ Get
တစ်ဦးကဆရာကိုသင်အကြံပေးနှငျ့သငျအသစ်သောကျွမ်းကျင်မှုရဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာဆက်နေရန်နှင့်ရာထူးတိုးရလိုလျှင်, ကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာတစ်ဦးဆရာရှိသည်ဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်. တစ်ဦးကဆရာသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလယ်ပြင်၌လူတို့အားမိတ်ဆက်နှင့်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူသငျသညျကိုကူညီနိုငျ.
သင်သည်သင်၏ဆရာဖြစ်ကုမ္ပဏီအတွက်မြင့်မားတဲ့အနေအထားကိုသူသည်သင်၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာတစ်စုံတစ်ဦးကိုမေးနိုငျ. အဲဒီလူကိုသင် likes နှင့်အရိုအသေရင်တောင်, ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူတို့အဘယ်သူမျှမပြောပါလိမ့်မယ်. တစ်ဦးဆရာဖြစ်ခြင်းအချိန်အများကြီးကြာ, နှင့်လူတစ်ဦးလည်းအလုပ်ရှုပ်နေစေခြင်းငှါ. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒီယူမနေပါနဲ့.
သင့်ရဲ့ဆရာသင့်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အနာဂတ်၌သငျရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့အလုပ်ရှိပါတယ်လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်. သို့သော်, သင်သည်လည်းသင်၏အဆရာဖြစ်သင့်ကုမ္ပဏီ၏တစ်စုံတစ်ဦးကိုပြင်ပမှာတောငျးဆိုနိုငျ. ဤသည်မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်နိုင်, တစ်ဦးအမှုတွဲကိုင်, အပျြောအမှုထမျး, ဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ဝင်, ကြီးကြပ်ရေးမှူးသို့မဟုတ် Co-အလုပ်သမား. သငျသညျလူကိုယ်တိုင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုငျဆရာခဲ့ကြတာကအကောင်းဆုံးက. သင်တဦးတည်းကိုမတှေ့နိုငျလြှငျ, သငျသညျအငျတာနကျပျေါတှငျကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ. သငျသညျမညျသူမဆိုမေးမြန်းဖို့မသိလျှင်, သင်လုပ်နိုင်သည် အွန်လိုင်းလမ်းညွှန်ကိုရှာဖွေ.
(စကားလုံး နောက်လိုက် ဗီဒီယိုများတွင်အသုံးပြုသည်. တစ်ဦးကနောက်လိုက်နည်းပြလျက်ရှိသည်သူကိုဆိုလိုသည်။)
သငျသညျရာထူးတိုးရလိုလျှင်, သငျသညျသင်ယူမှုစောင့်ရှောက်သောအရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. အသစ်သောကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူဖို့ဆက်လက်ဟုခေါ်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ.
သငျသညျ သာ. ကောင်းသည်နှင့်အရာမြားကိုသင်သည်သင်၏အလုပ်မှာပိုကောင်းပြုပါကကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်းခဲ့ကြသည်ဆန္ဒရှိကျွမ်းကျင်မှုစဉျးစားကွညျ့. တချို့ကအလုပ်ခွင်အခမဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးပူဇော်ပါလိမ့်မယ်. အခြားသောသူတို့သည်သင်တို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်သင်တန်းများအတွက်ဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်နိုင်သည်.
သင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေပါလျှင်သင်၌စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်, သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ကုန်ကျစရိတ်အချို့သို့မဟုတ်အလုံးစုံတို့အဘို့ပေးဆောင်နိုင်လျှင်သင့်ရဲ့မန်နေဂျာကိုမေး. သင်ပိုကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းလုပ်လိမ့်မည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်. ငွေအလုံအလောက်မရှိသောကြောင့်သင့်အလုပ်ရှင်မျှမပြောပါစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသငျသညျပဏာမခြေလှမ်းပြပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်.
Coursera အတန်းနည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၌ရှိကြ၏ကမ်းလှမ်းမှု, ဒါပေမဲ့တခြားရွေးချယ်စရာလည်းရှိပါတယ်. Coursera ကမ်းလှမ်းမှု ဒုက္ခသည်များအတွက်ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ.
LinkedIn တို့သင်ယူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တန်ဖိုးနည်းအတန်းရှိတယ်, ဆက်သွယ်ရေး, နှင့်နည်းပညာ. အဆိုပါသင်တန်းများကိုတစ်တွေအများကြီးနဲ့အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များထက်တိုတောင်းများမှာ, သငျသညျအလုပ်များလျှင်ဒါကြောင့်အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်.
Udemy အတန်း၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်. သငျသညျကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်, ဓာတ်ပုံ, နှင့်ဂီတ. သင်တို့သည်လည်းအချို့သော databases ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်.
5. Network ကိုရာထူးတိုးဖို့
Networking နည်းလမ်းများသင်သိလူအသုံးပြီးနှင့်အသစ်အခွင့်အလမ်းများရရှိလူသစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်. ကွန်ယက်အဖွဲ့အလုပ်ရှာဖွေတာနဲ့ရာထူးတိုးဖို့လုပ်ဆောင်နေ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
စက္ကူ applications များဖြည့်စွက်